Wondershare QuizCreator Guide - Easy Tutorial N'ihi na eke Quizzes
Na QuizCreator, ị nwere ike mfe ime Flash dabeere quizzes na nnyocha ndị na nkeji. Biko-eso nke a Walkthrough ndu na-enwe gị ajụjụ e kere eke.
Ego ajụjụ ụdị QuizCreator:
Ajụjụ ụdị maka eke a ajụjụ
Eziokwu ka ọ bụ ụgha, Otutu Nhọrọ (Single Azịza), Otutu Response (Multiple Azịza),
Wet ke ide, kenha, usoro, Okwu Bank, Pịa Map, Short edemede
Ajụjụ ụdị maka eke a nnyocha e mere
Likert ọnụ ọgụgụ, Ee / No, Buru One, Buru Ọtụtụ, gbara Azịza, kenha, ọkwa, nke Okwu ya, na edemede
Anyị ga-Multiple Nhọrọ ajụjụ dị ka ihe atụ iji gosi na ị otú ike a ajụjụ maka a zaa ajụjụ.
1. Mepụta a Multiple Nhọrọ ajụjụ
Họrọ Multiple Nhọrọ ke New Ajụjụ ndepụta na ị nwere ike idezi ajụjụ na Ajụjụ edezi window.
2. Tinye ajụjụ na ajụjụ ederede ubi
Ndị dị ike na-edezi atụmatụ, ị nwere ike mfe itinye ederede, oyiyi, arụmarụ, hyperlinks ma dezie Akara ókwú na ajụjụ na ederede ubi. Ma ị nwere ike itinye ụfọdụ zoro ezo ndetu ka mmezi ntụziaka maka ajụjụ a.
E wezụga na, QuizCreator-enye media ebe n'ihi na ị na fanye oyiyi, ọdịyo na video faịlụ. Fanye audio - Ịnwere ike idekọ ụda clip, mbubata ọdịyo faịlụ ma ọ bụ ọbụna tọghata ederede ka okwu maka gị ajụjụ. Fanye video - ị nwere ike itinye a FLV ma ọ bụ SWF faịlụ ka ajụjụ.
The ịtinye foto ma ọ bụ video ga-egosipụta na-esote ajụjụ ke bipụtara ajụjụ, dị nnọọ ka ndị na-esonụ na ọnụ ọgụgụ na-egosi.
3. Tinye nhọrọ na Nhọrọ ederede ubi
Tinye nhọrọ na Nhọrọ ederede ubi na kaa ziri ezi azịza ziri ezi na kọlụm. I kwesịrị itinye nhọrọ abụọ dịkarịa ala, na itoolu na kasị. Images, arụmarụ, hyperlinks na Akara ókwú edezi ndị dịnụ na nhọrọ.
4. Set nzaghachi maka otutu oke ajụjụ
Ị nwere ike inye ụfọdụ kenkwukorita nzaghachi ka ajụjụ takers mgbe ha zaa ajụjụ. Họrọ nzaghachi ụdị si ndọpụta ndepụta na Nzaghachi ìgwè.
Ị nwere ike ịtọ nzaghachi ozi site ajụjụ ma ọ bụ site azịza.
Ọ dịghị onye: Ọ dịghị nzaghachi ka ajụjụ ile mgbe azịza ya bụ osụk.
Site Ajụjụ: The nzaghachi dabeere ma ajụjụ na-zara ziri ezi ma ọ bụ.
Site Azịza: The nzaghachi dabeere na otu oke nke azịza ha. Quiz takers họrọ nhọrọ dịgasị iche iche ma na-dị iche iche nzaghachi.
Mgbe ị na-ahọrọ nzaghachi ụdị, ị nwere ike ugbu na-etinye na nzaghachi ozi maka ziri ezi na-ekwesịghị ịdị na nhọrọ na Ajụjụ Nzaghachi ebi ndụ. Pictures, arụmarụ, na ọdịyo faịlụ nwere ike ịtinye ma ọ bụrụ na pịa More bọtịnụ.
Branching bụkwa dị na Nzaghachi ìgwè. Ị nwere ike alaka ụlọ ọrụ ajụjụ takers dị iche iche ajụjụ dabere na ha Ibọrọ aga na ajụjụ. Dị ka nzaghachi, branching nwekwara ike kpọmkwem site ajụjụ ma ọ bụ site azịza. Ọ ga-eduzi ule takers ka 'ịnọgide "," rụchaa "ma ọ bụ" na-aga kpọmkwem ajụjụ ".
5. Mee ajụjụ Njirimara
Iji mee ka ọ a ezigbo ule, e nwere ụfọdụ Njirimara dị ka agafe ọnụego, ihe, oge ịgba na ndị ọzọ na nwere ike ịtọ ka ajụjụ.
6. Zọpụta ajụjụ
Mgbe ị gụsịa edezi ajụjụ, ị nwere ike pịa OK ịzọpụta ajụjụ ma na-emechi Ajụjụ edezi window. Ọzọkwa, ị pụrụ pịa New Ajụjụ button ịzọpụta ugbu a ajụjụ na ike ọzọ Multiple Nhọrọ ajụjụ.
Niile ajụjụ ndị ọzọ nke quizzes na nnyocha ndị nwere ike-kere ke yiri nke ahụ nke na-agbakwunye multiple oke ajụjụ.
E nwere ike na mgbanwe ntọala gụnyere ntụziaka peeji, agafe ọnụego, font na nzaghachi ị nwere ike ịtọ maka dum ajụjụ. Ihe bụ ihe ọzọ, i nwere ike randomize ajụjụ ndị ahụ, na-eme ka ajụjụ na-echebe paswọọdụ ma ọ bụ ngalaba hosting ịgba.
E nwere ọtụtụ nke siri ọkpụkpọ ndebiri esịne ke a ajụjụ onye. Ị nwere ike ịga Player Template ịhọrọ ihe kwesịrị ekwesị onye na dabara gị ajụjụ isiokwu. E nwekwara ụfọdụ na-ewu ewu ọkpụkpọ & agba gburugburu dị ka ofụri ofụri, ọzụzụ, agụmakwụkwọ, na fun n'ihi na ị na-ahọrọ. Ọ bụrụ na ị ga-amasị hazie gị onwe gị ajụjụ ọkpụkpọ, ọtụtụ ọnọdụ nhọrọ dị ka ndabere, toolbar, ọkpụkpọ size, labeelu na okirikiri nhọrọ ukwuu dị maka gị ike a ahaziri ọkpụkpọ.
Hazie gị template na gburugburu, peeji ntọlite ​​na mmetụta.
Ọzọkwa, ị nwere ike ịtọ okirikiri nhọrọ ukwuu na ngosi nhọrọ ndokwa okirikiri nhọrọ ukwuu ịke, na ọnọdụ maka ajụjụ na mgbasa ozi, na ịtọ ụfọdụ akpọkwa ngosi ma ọ bụ.
Ọ bụrụ na ndị atụ nke ajụjụ bụ na afọ ojuju, ị nwere ike ịga na-ebipụta ajụjụ. Mmepụta quizzes na nnyocha ndị nwere ike exported na-eso nhọrọ:
Ebipụta quizzes ka QuizCreator Online. Na ajụjụ nwekwara ike uploaded ka online Ajụjụ Pool abịa na QuizCreator Online n'ihi na ha na quizzes online. QuizCreator Online ga-anakọta results na n'ịwa akụkọ zuru ezu banyere maka quizzes.
Bulite bipụtara Flash quizzes ka Web. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịnakọta results na a kpọmkwem email.
N'ịwa SCORM ajụjụ ngwugwu maka òtù LMS. Iwekota SCORM / AICC ajụjụ ngwugwu ọ bụla òtù LMS dị ka Moodle, bọọdụ, weèb ma ọ bụ WebCT (adịghị n'ihi QuizCreator Free).
Emepụta a nguzo-naanị exe maka CD nnyefe.
Export dị ka Okwu ma ọ bụ Excel faịlụ maka akwụkwọ dabeere na ule.